Atụmatụ Visual Business ọ dabara adịrị gị mma?
Enwere Atụmatụ Atụmatụ Anya Maka Gị?
Tọzdee, Eprel 29, 2010 Saturday, October 20, 2018 Scott Hardigree
Indiemark na-bụ email ahịa gị n'ụlọnga, na azụmahịa nke atọ m. Ihe mbu mbu m bidoro nwayọ, too nke oma, ma nwekwaa ike mechie na nnukwu Bang. Ugbu a akụnụba agbanweela akụkụ, Indiemark yiri ka ọ nọ n'otu ụzọ ahụ.
Ruo ugbu a, amalitela m (ma emechabeghị) ọtụtụ atụmatụ azụmaahịa kpochapụla. Know maara… peeji 25-ọgaranya iche iche. Echere m na ọ bụ n'ihi na abụ m onye ikike zuru oke ma ọ bụ enweghị ndidi ma ọ bụ ha abụọ. N'ihi ya, m na-ejikarị nku nku ya were “atụmatụ azụmahịa”, mana ọ ga-adị m ka nzuzo m wepụta oge wee depụta usoro m ogologo na mkpụmkpụ nke ukwuu.
Yabụ oge a, emepụtara m atụmatụ azụmaahịa a na-ahụ anya.
N’okpuru, ị ga-ahụ nsụgharị ejikọtara. Ọ na-abịa na otu enyi Tactical Guide, nke ahụghị ebe a. Ọ bụ kemmiri ihe.
Biko… gwa m ihe ị chere!
Tags: azụmahịandu ahiaazụmahịa atụmatụEmail Marketing Agencyndu ahiaahia ahiaatụmatụ azụmahịa anya
Karịa Search Engine Optimization
Mgbe ụfọdụ, Social Means Shiut
Apr 29, 2010 na 12: 46 PM
Ekwenyere m - nke a bụ echiche dị egwu, ọ bụrụhaala na ọ na-esonyere nkọwa “kemmiri ihe” (dịka ị na-akpọ ya). O nweghi ihe o mere onye ị na-achọ (ịmaatụ ndị isi ike, ndị mmụọ ozi, ụlọ akụ, ndị ọrụ ha, wdg), ndị mmadụ na-ahụ anya ma, ekwenyere m, na-enwe ekele maka ihe okike iji gosipụta ụdị ọdịnala ọdịnala (dịka atụmatụ azụmahịa). Ọrụ dị mma, Scott! 😀
Apr 29, 2010 na 2: 09 PM
Ahụrụ m nke a n'anya. Nnukwu ọrụ!
Apr 29, 2010 na 7: 21 PM
M na-ekekọrịta ebumnuche gị ime ka atụmatụ azụmaahịa dị mkpụmkpụ ga-aba uru. Peeji 25? Ọ dịghị onye ga-agụ. Peeji 1? A ga-atụnye ya n'akụkụ onye nyocha ọ bụla ma tụlee ya mgbe mgbe.
Nke ahụ kwuru, echeghị m na ihe atụ a na-arụ ọrụ. Ọ NA-AMAS like m nke ọma na ọ na-akọwa usoro okike nke ndị nwere oke, nke ọ bụla nwere mkpa na omume dị iche iche. Agbanyeghị, ọ na-anọ n'ọkwa dị oke elu. Ọ bụ karịa snapshot karịa atụmatụ, oke karịa ihe na onye, ​​ezughi nke How.
Atụmatụ azụmahịa dị irè - enwere ike ịme ya na ibe ma ọ bụ abụọ - kwesịrị ijikọ ebumnuche dị elu na ebumnuche ya na usoro na omume ụfọdụ. Gbaghaala echiche m site na itinye mkparịta ụka bara ụba nke Whonye, ​​mana na njedebe, echeghị m na ị gaferela iji mee ihe a.
Ọ ga-amasị m ịnọgide na-atụle!
mp eghere eghe
Apr 29, 2010 na 10: 24 PM
@mark You're kwuru eziokwu. Ihe enyemaka a na-ahụ anya na-enye naanị ndị otu anyị (ma na-echetara anyị) dina ala ahụ, ma ọ bụ Eluigwe na ala dị ka ọ dị. Ihe na-efu bụ ebumnuche anyị, ọrụ anyị, na akara anyị. Ndị ahụ bi na mpempe mgbanaka mgbanaka atọ akpọrọ 'Tactical Operations'. Ya onwe ya bu ihe ederede / eserese ma buru nkenke, mana enwere ike idozi ya ma gbanwee ya.
@Katie na @Dave Daalụ maka okwu ọma ahụ. Usoro a masịrị m ma rite uru na ya. Na mgbakwunye, ọ bụ ụdị ọchị.
Mee 9, 2010 na 4: 18 PM
Ọ bụrụ na ọ nweghị ihe ọzọ mere ka m chee echiche. Adị m ọhụrụ na atụmatụ azụmaahịa ma na-enwe nnukwu oge m ga-emecha Bp. Nke a bụ ihe m nwere ike ịme n'agbanyeghị, ihe kwesịrị inye aka gbarie ihe mgbochi nke m yiri ka m wulitere gburugburu atụmatụ maka azụmahịa "ụdị". Karịsịa mgbe nke ahụ abụghị ihe m chọrọ ịnwe.
Daalụ maka ịkekọrịta.
Jenụwarị 6, 2012 na 7:50 PM
Na-akọ akụkọ ahụ ka onye ọ bụla wee ghọta atụmatụ / atụmatụ azụmaahịa ka ị wee nwee ohere ka mma nke igbu egbu.